सेरोफेरो : April 2009
'९ः३० बजेको हुँदो हो, सडकमा छ जना आएका थिए। त्रिविले परिक्षा शुल्क बढाएको विरोधमा उनीहरूले नारा लगाए। दुईजनाले हातमा ड48डा नभएको झ48डा बोकेका थिए। १५ मिनेट भन्दै बाटो बन्द गरे। म बाइकमा अस्पताल जाँदै थिएँ। १५/१५ मिनेट भन्दाभन्दै आधा घ48टा हुन लाग्यो। सडकमा गाडीको निकै चाप भयो। सबै चालकले अटेर गरेर जान खोज्यौं। दुई चारजना अरू विद्यार्थी थपिए। म बाइक लिएर भाग्न खोज्दैथिएँ, मेरै आडैका दाइको नयाँ सिबिजेड बाइकमा उनीहरूले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिए। मैले आफू र आफ्नो बाइक बल्लतल्ल जोगाएँ।'
–सुदीप गुरूङ, गोल्डेन गेट एकेडेमी, काठमाडौ
थापाथली क्याम्पस अगाडि सडकमा गुरूङले यो कुरा बताउँदै गर्दा उनको स्वरमा रिस मिसिएको थियो। आँखा र कान रात भएका थिए। उनको नजिकै जलिरहेका बाइक, साइकल, टेबल, कुर्चीको आगो सेलाइसकेको थिएन। मान्छेको भिडले विद्यार्थीका कर्तुतविरूद्ध चर्का नारा लगाइरहेको थियो। क्याम्पसको प्रवेशद्वार प्रहरीको कडा सुरक्षाभित्र घेरिएको थियो।
'आन्दोलनका नाममा जनताको बाइक जलाउने?,' आक्रोशित भिडबाट प्रहरीतर्फ हेरेर कराउँदै गरेका उदयराज सिवाकोटीले भने, 'को हो त्यो? खुरूक्क बाहिर निकाल।'
आराम छौं ?
भरियाले भने संविधानले ´नहुने जनतालाई उकास्नु परो´
म अहिले काठमाडौँको, न्युरोड चोकमा छु। टाउकामाथिको घामले बिहान ११ बजेको संकेत गर्दै मेरो तालु सुकाइरहेको छ। अघिल्तिरको सडकमा साइलेन्सर माथि उठेका ´मोडर्न भटभटे´, ट्याक्सी, टेम्पो र अन्य गुडगुडे गन्तव्यतिर जान हतारोमा देखिन्छन्। फुटपाथमा जुत्ता बजार्नेहरू पैदलमात्र हैन ओठ पनि चलाउँदै कुदेका छन्।
नकुदेको आकृति त्यही सडकबीच ठिङ्ग उभिएको जुद्धशमसेरको सालिक हो। त्यसको पनि बायाँबाट एकजना स्याँ–स्याँ गर्दै मैतिर लम्किदैछन्। न्युरोडको कोलाहललाई चिर्दै उनीसँगै म पनि हिँड्न थाले। विशाल बजारभन्दा केहीअघि पुगेपछि उनी दायाँतर्फको मखन गल्ली मोडिँदा मेरो मुखबाट वाक्य फुत्कियो, ´दाइ कहाँ पुग्ने?´
´यहीँ पल्तिर,´ उनको सास छिट्छिटो चल्दै थियो।
मेरो उत्सुकतामा त्यत्ति चाख नदिएका उनलाई केही अगाडिको नौमुग गल्लीमा पनि मैले पछ्याउन छाडिन। साँघुरो गल्लीका दुई भित्तामा उनको पिठ्युँका भारीले कोतरेर धर्को बनाउँदैछ। बल्लबल्ल केही पाइला चालेपछि उनका फुटेका कुर्कुच्चा साततले भवनको भर्‍याङमा बिच्छ्याइएका मार्बलमाथि परे। छिर्ने ढोकैमा ६२/९ ´ख´ लेखेको प्लेट टाँसिएको त्यो घर उनका लागि नौलो थिएन। ´फ्वाँ–फ्वाँ´ सास निकाल्दै ठूलो भारीको बोझमा कुप्रिएको त्यो ४६ वर्षे चाम्रो शरिरले दोस्रो तल्ला पुगेपछिमात्र सोझिने मौका पायो।
´के काम पर्‍यो होला?´
Labels: पात्रकथा, फिचर
´बालबालिकाका लागि एक आवाज´
भवसागर घिमिरे, काठमाडौं-
´साथीहरू सबैले पढ्न, खेल्न पाउनुपर्यो, स्कुल बन्द हुनु भएन। सरमिसले कुट्नु भो भने दिक्क लाग्छ, यत्ति नै।´ आफुअघि तेर्सिएका अनेकन आँखा र क्यामेरामाझ यो छोंटो मन्तव्य दिने बालिका थिइन् पारूल राई। दर्शकलाई भावुक बनाउनेगरी थोरै शब्दमा धेरै अभिव्यक्ति दिएकी घरेलु श्रमिक राईलाई तालीको गढगडाहटद्वारा धेरैले प्रशंसा गरे।
साना बोल्दै, ठूला सुन्दै
भवसागर घिमिरे, काठमाडौं, चैत २०
´हुम्म्...त्यसपछि के रे...,´ कथा भन्दा भन्दै रोजन भाइ एकपल अडिएर फेरि ओठ चलाउन थाले, ´यो कथा भुलेँ अर्को भन्छु है!´
भेला भएका साथीभाइ र बूढापाका उनको कुरो सुनेर हाँस्दै सहमतिमा मुन्टो हल्लाउन थाले। उनले पनि हाँस्दै अर्को कथा सुरू गरे।
बालप्रिय थुप्रै कथा लेख्ने हान्स क्रिश्चियन एन्डसनको जन्मदिन र ´अन्तराष्ट्रिय बाल पुस्तक दिवस´ का अवसरमा कार्यक्रम भइरहेको थियो। राष्ट्रिय पुस्तकालयको बालशाखा, पुल्चोक ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका सभापति बालक लक्ष्मण सापकोटा मख्ख थिए। सबै भाइबैनीका कुरा सुन्न र आफ्ना कुरा सुनाउन थुप्रै बाल साहित्यकार उपस्थित थिए। एन्डसनबारे बताउन नेपाल बाल साहित्य समाजका चुडामणि बन्धु पहिला अघि सरे।
२०४ वर्षअघि डेनमार्कको गरिब परिवारमा जन्मेका एन्डर्सन नाटकमा खुबै चाख राख्थे। उनका बाबुको सानैमा मृत्यु भयो र आमाले दोस्रो बिहे गरिन्। यो घटनापछि उनी आफ्नो गाउँ छाडेर सहर झरे। राम्रो प्रतिभाका कारण उनले स्कुल पनि पढ्न पाए। रमाइला नाटक खेल्न र रोचक बालकथाहरू लेख्न थालेका उनको चारैतिर प्रशंसा हुन थाल्यो। धेरै दुःख गरेर पढे, अनि धेरै कथा प्रकाशन पनि गरे। बालबालिकासम्बन्धी थुप्रै कथा लेखेर बाल साहित्यमा योगदान गरेकाले उनलाई विश्वभरका मान्छेले सम्झन्छन्।
एन्डसनको जीवनी सुनेर उत्साही भएका बालबालिका कार्यक्रममा कथा सुनाउन तछाडमछाड गर्न थाले। पूजा सिग्देलले तीन चोरका कथा सुनाइन्। रोशन चौधरी र सृष्टी खनाल पनि कथा सुनाउन पछि परेनन्। उनका रचना मख्ख पर्दै सुनेर उमेर ढल्काएका र ढल्काउँदै गरेका साहित्यकारले परर ताली बजाए। केटाकेटीका कुरा सुनेर उत्साहित पाका पनि कथा भन्न तम्सिए। बाल साहित्यकार शान्तादास मानन्धरले ढल्केको उमेरमा युवा जोश निकालेर ´सलाई बेच्ने केटी´ को कथा सुनाउँदा बालबालिका दङ्ग पर्दै सुनेका थिए।
´पुस्तक पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ,´ बाल साहित्यकार विनय कसजूका कुराले सबैको ध्यान खिच्यो, ´पढ्यो भनेमात्र धेरै कुरा थाहा हुन्छ।´ पढ्ने कुराले गम्भीर बनेका केटाकेटीलाई चुट्किलाको माहोलले निकै ततायो।
´गोलभंेडा पास भएपछि स्याबास भनेर उसको बाबाले ढाडस दिँदा प्वाट्ट फुटेको´ चुट्किला सुनेपछि सबैको खित्का छुट्यो।
´कसैले गीत गाउँदैनौ?,´ सञ्चालक धु्रव घिमिरेको प्रश्नमा पछाडिबाट एकजना बोले, ´म गाउँछु।´ नेपाल बालसाहित्य समाजका अध्यक्ष विश्वम्भर चञ्चल रहेछन्। उनका छोटा गीत सकिन नपाउँदै आफ्ना रचना सुनाउन भाइबैनीका धेरै हात उठे। धेरैमध्येका एक भाइले गाएका गीतमा सबैको एउटै स्वर बन्यो–
´कसो गरी हुन्छ भन्देऊ, हाम्रो बानी राम्रो?
सिङ्गै आकाश अंगालेर हिंड्ने बानी हाम्रो!´